Ekoatora: #Ruraleando, Bilaogy Iray Mametraka Ny Maha-olona Eo Amin’ny Lafiny Fitsaboana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2013 4:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Italiano, Español
Mifandray amin'izao tontolo izao ny mponina any Patután, Cotopaxi [en] any amin'ny sisin'i Ekoatora amin'ny alalan'ny bilaogy iray: #ruraleando. Tsy tonga an-tsain'ireo marary izay mitsidika io Klinika Fitsaboana ao amin'ny Paroasy io angamba fa isanandro aorian'ny ora hiravàny dia mamoaka, tsy amin-tahotra na manao sivana ny tenany, ireo olana sy ezaka eo amin'ny rafitry ny fitsaboana, i Denisse Calle (@niches13), sady mitantara izay niainany nandritra ny nirotsahany ho mpitsabo any ambanivohitra. Ataony izany satria fantany izay resahany: manontany izy, manadihady, manandrana ary manome vahaolana.
Raha mitsidika ny #ruraleando ianao, mety hijanona ianao ka hamaky ny momba ny andro faha-112, rehefa nihaona tamin'i Doctor Calle i Segundo, olona iray mandrongony manaraka fitsaboana izay tonga niaraka taminà aretin-tsinay, ary feno tsikitsiky rehefa nomena fahafahana vaovao hiarina indray amin'ny fiainana.
Misy koa ny tantaran'ilay marary iray 29 taona izay manana tahanà siramamy ambony be, izay, taorian'ny nahatongavany tao amin'ny toeram-pitsaboana hanao fitiliana dia notenenina tsotra fotsiny fa tsy marary izy, ary tokony hiverina efatra andro taorian'izay– sady tsy nisy fitiliana natao na iray aza!
Denisse miaraka amin'i Génesis, iray amin'ireo marary tsaboiny. Sary nalaina tao amin'ny #ruraleando, ary nampiasaina teo ambany lisansa Creative Commons (CC BY-SA 3.0 EC)
Noho io bilaogy io, afaka nifandray tamin'ireo solontena nasionaly misahana ny Fahasalamana i Denisse ary nilaza tamin'izy ireo ny zavatra ilaina nefa toa tsy hita, toa tsy tsapa na koa tsy iainana raha tsy lasa ampahany amin'io zava-misy andavanandro io ry zareo.
Amin'ny alalanà sosokevitra ho anà fandaharam-potoana fanofanana amin'ny fitsaboana vonjimaika taorian'ny nanampiany olona iray niharan'ny lozam-pifamoivoizana tanatinà toerana sarotra dia sarotra, afaka nifampiresaka tamin'ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka sy ny minisitry ny Atitany izy. Tao anatin'ny lahatsoratry ny bilaogy iray, manazava ilay mpitsabo fa:
Tamin'ny Jolay, nahazo fanasàna handray anjara aminà Seminera Lehibe Iraisam-pirenena ”Retos Actuales de la Salud Pública en Ecuador y Vigilancia Ciudadana de las Políticas Públicas y Servicios de Salud” [Fivoriambe-Atrikasa Iraisam-pirenena “Sedra misy ankehitriny eo amin'ny Fahasalamam-bahoaka ao Ekoatora sy ny Fanarahamason'ny Vahoaka ny Politikam-panjakana sy ireo Tolotra Ara-pahasalamana”], ary Maripankasitrahana Nobel eo amin'ny lafiny Fitsaboana i Denisse, i Thomas Südhof [en] aza dia namaly mihitsy ny iray tamin'ireo fanontaniany avy amin'ny BBC.
Tamin'izany fomba izany, lasa tena izy tsikelikely ilay nanomboka tamin'ny nofinofy. Hatramin'ny namoahany ny lahatsoratra voalohany indrindra ny Febroary 2013, i Denisse dia nanoratra mikasika ny faniriany ny mba “haneho fa manomboka any ambanivohitra ny fiovàna ara-pahasalamana; raha toa ka ampianarina reo zavatra heverina ho bitika indrindra sy tsy dia ilaina loatra aza ny vondrom-piarahamonina, mety hahavita fanovàna goavana ianao”.